रमेश प्रसाई र नन्दा शाहीलाइ पुत्री लाभ – Krazy NepaL
November 30, 2021 135
काठमाडौं, पब्लिक स्पीकर नेपाल २ बिजेता एवम् गायक तथा प्रखर वक्ता एवम् अहिले Galaxy4K बाट लाल मोहर जस्तो चर्चित कार्यक्रम चलाईरहनु भएका आदरणीय रमेश प्रसाईं सर र उहाँकी धर्मपत्नी नन्दा लाई यत्ती राम्री पुत्री लाभ भएको छ । उहाँहरु दुबै जनाको दृष्टि बनेर आएकी गुडियालाई जन्मदिनको शुभकामना सहित आमाबाबा बन्नु भएकोमा हाम्रो हार्दिक बधाई तथा सुभकामना ।
रमेश प्रसाईं र सामाजसेवी नन्दा सिंहलाई आज बिहान पूत्री लाभ भएको छ । अघिल्लो वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिएका प्रसाईं र नन्दा सिंहलाई आज काठमाडौंको एक अस्पतालमा पूत्री लाभ भएको हो । कलाकार दिपाश्री निरौला आज बिहान अस्पताल पुगेर बधाई दिंदै फोटोहरु पोष्ट गरेकी छिन् । रमेश प्रसाईंले धरानमा बसेर आफ्नो पत्रकारिता अघि बढाई रहेका थिए भने नन्दा सिंह काठमाडौंमा सामाजिक संस्था चलाईरहेकी थिईन । यी दुईको प्रेम विवाह भएको हो । विवाह पश्चात रमेश प्रसाईं काठमाडौं बस्न थालेका हुन् ।
रमेशमा भएको धारावाहिक प्रवचन गर्न सक्ने कलाले सबैलाई आकर्षित गर्दै आएका छन् । उनी सामाजिक विषयदेखि राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा आएका विषयहरुमा सटिक टिप्पणी गर्छन् ।शारीरिक अपाङ्गता भएका उनले सामाजिक संजालमा सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्ना विचारहरु राख्ने गर्छन् । उनले सामाजिक संजालमा कविता तथा अन्य माध्यमबाट आफ्ना विचारहरु राख्दा आफू भित्रको कुण्ठा बाहिर आउने बताउँछन्
Prevसुत्ने गलत तरिका, खानामा बढी चिनीले छिट्टै बुढो बनाउँछ, कसरी बच्ने ?
Nextआज मंसिर १५ गते बुधवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल
श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया गर्छन् यी चार राशी भएका पुरुषहरुले…(भिडियाे सहित)
बाल्यकालदेखि नै राजयोग लिएर ठूला हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, जीवनमा कहिलै हुँदैन दुख
“कपाल झरेर हैरान हुनु हुन्छ ? सायद पेटसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ, यी खाने कुराहरु खानुस् “
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45424)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24027)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18597)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (16796)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (14987)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13921)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (13007)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12964)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12851)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12433)